Somaliland oo QM ka dalbatay in aan DFS loo so marsiin Deeqaha | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Somaliland oo QM ka dalbatay in aan DFS loo so marsiin Deeqaha
Somaliland oo QM ka dalbatay in aan DFS loo so marsiin Deeqaha
Madaxweynaha Somaliland, Muuse Biixi Cabdi iyo oo kusugan Magaalada New York ee dalka Maraykanka ayaa xarunta guud ee Qaramada Midoobay kulan ballaaran kula qaatay mid ka mid ah ku-xigeenka xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay.
Kulankan oo ahaa mid ay albaabadu u xirnaayeen oo ay madaxweynaha Somaliland iyo ku xigeenka xoghayaha guud ee qaramada midoobay ku lafo gureen arrimo muhiim ah oo ku saabsan Somaliland.
Wasiirka Arrimaha Dibadda Somaliland Dr. Ciise Keyd Maxamuud oo kulanka faah faahinayay ayaa sheegay in ay ka wqda hadlay qadiyada Somaliland iyo sidii ay Qaramada Midoobay kaalmooyinka ay bixiso si toos ah u siin lahayd Somaliland, iyadoo aan cidna loo soo marin.
Wasiirka oo sii wata hadalkiisa ayaa yiri “Sidoo kale waxa aanu kala hadalnay horumarinta beeraha, Kalluumaysiga, dhibaatooyinka abaaraha soo noq-noqday iyo sidii biyaha roobka ee da’a aynu u qaban lahayn oo aynu biyo-xireeno badan uga samayn lahayn dalkeena, markaa waanu isla qaadanay fikradahaas, waxaanu shirkaasi noqday mid guul noogu soo dhammaaday, waana guul kale oo Somaliland u soo hooyatay”.
Madaxweynaha Somaliland ayaa dib ugu laabtay Magaalqda Washington DC oo ay ka sii wadan doonaan hawlihii shaqo ee ay halkaa u joogeen, iyagoo maalintii tobanaad ku sugan dalka Maraykanka.
Somaliland oo QM ka dalbatay in aan DFS loo so marsiin Deeqaha was last modified: March 22nd, 2022 by warsan radio
RW Rooble Oo War Kasoo Saaray Geerida Sheekh Shariif Sheekh Muxayadiin Celi
Akhriso:-Dowlada Soomaaliya oo la wareegtay qalab loo isticmaalo duulista hawada oo ay leedahay hay’ada ICAO
Akhriso:-Agaasimihii Warbaahinta Aqalka Cad Scaramucci oo shaqada laga eryay
Dhageyso:-Hambaliyada maalinta Xorriyadda Saxaafada Adduunka.
Diyaarad ay la socdeen ku dhawaad 30 Ruux oo lagu waayay gudaha Ruushka
Wararkii u danbeeyay Hotelka Elite oo weli Rasaas ka socota & dad ay ku jiraan Xildhibaano oo la soo badbaadiyey
Madaxweynaha Puntland Oo Daahfuray Kal-fadhiga 47-aad Ee Golaha Wakiilada Puntland